Jubooyinka oo laga hadlay''Dhageyso
13 Jan 13, 2013 - 4:46:32 AM
Sida loo xaqiijiyay Radiogarowe xafiiska Kismaayo waxaa heer gabo gabo maraya qorshihii mamul gobaleed loogu samayn lahaa Gobalada Jubooyinka iyo Gedo ,iyadoona todobaadka soo socda lagu wada magalada Kismaayo inay gaaraan ergooyin loo soo xulay mamul u samaynta gobaladaasi.
Gudoomiye ku xigeenka mamulka KMG-ah ee Kismaayo Yaasiin Nuur Gaas oo maanta 13 January,2013 la hadlayay Radio Garowe ayaa shaaciyay inuu meel wanaagsan maraya mamul u samaynta Jubooyinka iyo Gedo,wuxuna sidoo kale ka sheegay amaanka Kismaayo inuu yahay mid la isku halayn karo oo shacabku ay habeen iyo maalinba dhex maraan xaafahada magalada.
Todobaadkaan horaantiisii Mamulka ku meelgaarka ah ayaa ku guulaystay inay dib u furaan garoonkii kubada cagta ee Kismaayo,waxaana arinkaasi soo dhaweeyay bahda ciyaarta xiisaysa ee magaladaasi ku sugan,waxana isla markiiba la bilaabay koob u dhaxeeya naadiyada ka dhisan Magaalada.
Tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen magaaladasi ciidanka dowlada iyo kuwo Kenya iyo Raaskaabooniyiinta waxaa is badal wayn laga dareemayaa isku socodka dadka iyo gaadiidka ganacsiga,caafimaadka waxana suuqyada ganacsiga si xowli ah ugu soo badanaya dadkii horay ugu ganacsan jiray.
Halkan ka dhageyso Cali Fantastic oo wareystey Yaasiin Nuur Gaas